Vavaka isan'andro isan'andro hahombiazana amin'ny fiainana | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Vavaka isan'andro isan'andro hahomby amin'ny fiainana
Vavaka isan'andro isan'andro hahomby amin'ny fiainana
Lioka 18: 1:
1 Ary nanao fanoharana taminy taminy Izy, dia tokony hivavaka foana ny olona fa tsy ho reraka;
vavaka dia fifandraisana amin'Andriamanitra, ary vavaka isan'andro dia midika fotsiny fifampiresahana isan'andro amin'Andriamanitra. Amin'ny maha mpino anao, mba hahitana ny tena fahombiazana amin'ny fiainana, dia tsy maintsy mifanaraka tsara amin'ny mpanao anao ianao. Manana ny drafitra eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, fantany ny fiafarantsika hatramin'ny voalohany, noho izany dia tokony mifandray tsy tapaka Aminy amin'ny alàlan'i Jesoa Kristy Tompontsika isika, mba hahombiazantsika amin'ny fiainana. Jesosy niteny ao amin'ny Jaona 15: 5-9, dia nilaza izy fa Izy no voaloboka ary isika no sampana, mba hamoa ny sampana hamoa, dia tsy maintsy miraikitra amin'ny voaloboka izy ireo, rehefa tsy voafatotra intsony izy ireo. miteraka sampana. Amin'io lalan-droa io ihany, dia tsy afaka mahita ny tena fahombiazana isika eo amin'ny fiainana rehefa voafatotra amin'Andriamanitra. Androany dia hijery vavaka isan'andro 100 isika hahombiazana amin'ny fiainana. Raha te hahita fahombiazana amin'ny maha kristiana ianao dia tokony hanao izany vavaka ny fomba fiainanao.
fahombiazana eo amin'ny fiainana dia tsy ny fitadiavam-bola fotsiny. Betsaka ny olona milomano amin'ny vola nefa tsy mahomby, manana ny zavatra rehetra vidian'ny vola izy ireo fa ny tsy manana ny zavatra sarobidy amin'ny fiainana. Ny fahombiazana dia tsy ahitana ny haben'ny fananana nangonin'ny olona iray. Ny fahombiazana dia miaina fiainana feno fahafaham-po, miaina fiainana mitondra tanjona. Voalaza fa mahomby amin'ny fiainana ianao rehefa manatanteraka tanjona voatendrin'Andriamanitra amin'ny fiainana. Fa ahoana no ahitako ny tanjoko amin'ny fiainana? Tsy misy fomba tsara kokoa hahitana ny tanjonao amin'ny fiainana fa ny fampifandraisana amin'ny mpanamboatra anao. Andriamanitra no mpanamboatra antsika, ary ny vavaka no fomba ifandraisantsika amin'ny mpanamboatra antsika hahafantarana ny tanjontsika amin'ny fiainana. Ity vavaka isan'andro ity mba hahombiazana amin'ny fiainana dia hanampy anao hahita ny tanjonao amin'ny fiainana. Manentana anao hiaina fiainana am-bavaka aho, hifandray amin'Andriamanitrao foana ary hitako manova ny tantaranao amin'ny anaran'i Jesosy izy. Ireto ambany ireto ny vavaka isan'andro ho amin'ny fahombiazanao amin'ny fiainana.
Vavaky ny maraina
1). Ray ô, misaotra anao aho fa namoha ahy androany maraina tamin'ny anaran'i Jesosy
2). Ray ô, misaotra anao miaro ny anjely amin'ny alàlan'ny torimasiko amin'ny anaran'i Jesosy
3). Dada Ray, avelao ny famindramponao vaovao vaovao isa-maraina ho ato amiko anio amin'ny anaran'i Jesosy
4) .Fy, hatolotrao eo an-tananao aho anio, satria manomboka miaraka aminao aho Tompo, hiaraka amiko amim-pahombiazana hatrany amin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy.
5). Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, arovy aho amin'ny ratsy rehetra izay nokasain'ny devoly ho ahy androany amin'ny anaran'i Jesosy.
6). Ray ô, manambara aho fa ny hivoahako anio maraina sy ny fidirako dia ho azo antoka amin'ny anaran'i Jesosy
7). Ray ô, tariho ny teniko mandritra izao anio izao amin'ny anaran'i Jesosy.
8). Ray ô, avelao ny olona rehetra hifanerasera amiko anio maraina mba hiantra ahy amin'ny anaran'i Jesosy
9). Ray ô, omeo ahy ny fanirian'ny foko (ilazana azy ireo) anio maraina amin'ny anaran'i Jesosy.
10). Ray ô, misaotra anao aho noho ny vavaka novaliana tamin'ny anaran'i Jesosy.
Vavaka hahazoana fahombiazana
1). Ray ô, misaotra anao aho fa ilay Andriamanitra manome hery hahomby amin'ny anaran'i Jesosy
2). Ray ô, misaotra anao aho noho ny fahendren'i Kristy izay miasa ato amiko amin'ny anaran'i Jesosy
3). Ray no ambarako fa tsy ho tanteraka amin'ny fiainana eto amin'ity fiainana ity amin'ny anaran'i Jesosy aho
4). Na manao ahoana na manao ahoana ny hamafin'ny firenena ara-toekarena dia hahomby tsy am-pitoniana aho ao amin'ny yesie
5). Nambarako fa tsy misy tendrombohitra izay matanjaka manohitra ahy amin'ny anaran'i Jesosy
6). Ambarako tsy misy dikany ny drafitry ny fahavalo handroaka ahy
7). Ambarako fa ny fankasitrahan'Andriamanitra izay mahomby dia hanome fahombiazana lehibe anao amin'ny anaran'i Jesosy
8). Izaho dia mandà ny fahantrana amin'ny anaran'i Jesosy izay miaina
9). Laviko ny tsy fahombiazan'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy
10). Ray ô, misaotra anao aho fa voavaly amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka ataoko
Ny vavaka ho an'ny fitarihana
1). Ray ô, amboary ny diako amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy
2). Ray ô, ambarako ankehitriny fa satria mpiandry ahy i Jesosy dia tsy ho diso lalana intsony aho
3). Ray ô, arotsaho ny olona mandeha amin'ny fotoana mety ary amin'ny fotoana mety
4). Dada ataon'i Dada amin'ny alàlan'ny toerana mety amin'ny anaran'i Jesosy.
5). Ray ô, arotsahy ny olona mankany amin'ny olona mahitsy amin'ny anaran'i Jesosy
6). Dada ataon'i Dada amin'ny alàlan'ny asa mety, asa aman-draharaha sy / na raharaham-barotra amin'ny anaran'i Jesosy
7). Ray ô, aza tariho aho amin'ny fakàm-panahy, fa afaho amin'ny ratsy rehetra aho amin'ny anaran'i Jesosy
8). Ray ô, avelao ny teninao ho boky fitarihana voalohany ho ahy hatrizay mandroso amin'ny anaran'i Jesosy
9). Ry Fanahy Masina malala, ho mpanolotsaina lahatra ho ahy hatrany manomboka anio amin'ny anaran'i Jesosy
10). Misaotra anao Dada noho ny famalianao vavaka amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny vavaka ho an'ny fifandraisana
1) Ray ô, misaotra anao aho fa anao ilay Andriamanitra manangana ny malahelo amin'ny vovoka ka manao azy hiara-misakafo amin'ny olona ambony ao amin'i Jesosy anarana
2). Andriamanitra ô, ampifandraiso amiko amin'ny lehilahy lehibe rehefa nampifandray an'i Joseph tamin'ny anaran'i Jesosy ianao
3). Andriamanitra ô, ampifandraiso amiko amin'ny lehilahy lehibe rehefa nampifandray an'i Mefiboseta tamin'ny anaran'i Jesosy ianao
4). Ray, amin'ny alàlan'ny herin'ny Fanahy Masina, mampifandray ahy amin'ireo mpanampy ahy amin'ny anjarako amin'ny anaran'i Jesosy.
5). Ray ô, amin'ny tananao mahery, itondray lehilahy sy vehivavy lehibe izay hanampy ahy hahatratra ny nofinofiko amin'ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy
6). Amin'ny alàlan'ny hery amin'ny anaran'i Jesosy, tafasaraka amin'ny mpamono olona amin'ny anaran'i Jesosy aho
7). Amin'ny alàlan'ny hery amin'ny anaran'i Jesosy, tafasaraka amin'ny fahavaloko ny fandrosoako amin'ny anaran'i Jesosy
8). Tamin'ny alàlan'ny hery tamin'ny anaran'i Jesosy, tafasaraka amin'ny namana sandoka amin'ny anaran'i Jesosy aho
9). Ray amin'ny alàlan'ny hery amin'ny anaran'i Jesôsy, aparitaho ireo fahavalon'ny tsiambaratelo rehetra amin'ny fivoarako amin'ny fiainana amin'ny anarana jesosy
10). Ray ô, misaotra anao aho tamin'ny famaliana ny vavaka tamin'ny anaran'i Jesosy
Ny vavaka ho fiarovana
1). Ray ô, misaotra anao aho noho ny ampingako sy ny fiadiako amin'ny anaran'i Jesosy
2). Raiko ô, mitsangàna, arovy aho amin'izay mitady ny fahoriako
3). Aoka ho menatra izay rehetra mitady ny mahamenatra ahy
4). Raiko ô, tohizo hatrany ny fiarovana ahy amin'ny lehilahy ratsy fanahy sy tsy misaina
5). Ray ô, miadia amin'ireo izay miady amiko amin'ny anaran'i Jesosy
6). Ray ô, arovy tsy tapaka amin'ny zana-tsipìka manidina isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy aho
7). Raiko, raha misy fahavaloko tonga iray hamely ahy amin'ny fomba iray, dia lalana fito no handosirany amiko
8). Afaho aho amin'ny tanan'ny mpiampanga lainga amin'ny anaran'i Jesosy
9). Ray ô, arovy ary arovy ny ankohonako sy ny ankohonako amin'ny anaran'i Jesosy
10) .Tena anao ray mamaly ny fivavahako amin'ny anaran'i Jesosy.
Vavaka hahazoana famindram-po
1) .Misaotra anao noho ny fankasitrahanao fa tsy afaka mividy amin'ny anaran'i Jesosy ny vola
2). Ray ô, misaotra anao noho ny fahasoavanao tsy voafetra izay nankafiziko hatrany tamin'ny anaran'i Jesosy
3). Ray ô, avelao ny fahasoavanao hanodidina ahy mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy
4). Ray ô, avereno aho hahita fitia eo anatrehan'ny olona lehibe amin'ny anaran'i Jesosy
5). Ray ô, avelao ny fankasitrahanao hiteny amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy
6). Ray ô, manaova amiko izay tsy azoko atao ho ahy amin'ny anaran'i Jesosy
7). Ray ô, mitsangana aho ary hitombo hatrany amin'ny alalanao amin'ny anaran'i Jesosy
8). Ray ô, noho ny alalanao, ataovy ny anarako koa, ho tsara eo anatrehan'ny olona lehibe amin'ny anaran'i Jesosy
9). Ray ô, misaotra anao noho ny fankasitrahanao tsy tapaka amin'ny anaran'i Jesosy
10). Misaotra anao Tompoko tamin'ny famaliana ny vavaka nataoko tamin'ny anaran'i Jesosy.
Vavaka ho an'ny ankohonany
1). Ray ô, atolotro ny ankohonako manontolo amin'ny fikarakarana anao amin'ny anaran'i Jesosy
2). Navelan'i Dada hatanja ny tananao mahery ny fiarovako amin'ny anaran'i Jesosy
3). Raiko, arovy ny fianakaviako amin'ny zana-tsipìka manidina amin'ny andro
4). Dada a, manambara aho fa tsy hisy vaovao ratsy amin'ny fianakaviako amin'ity taona ity sy mihoatra noho ny anaran'i Jesosy
5). Manarona ny ran'i Jesosy ny mpianakaviko
6) Izaho dia manapa-kevitra fa tsy misy fitaovam-piadiana miady amin'ny mpianakaviko izay handimby ny anaran'i Jesosy
7). Amin'ny maha-fianakaviana antsika, ny fananantsika mafy dia ny anaran'i Jesosy, noho izany tsy misy devoly afaka handresy antsika amin'ny anaran'i Jesosy
8). Ray ô, afaho ny anjelinao miaro ny fianakaviako rehetra mba hiaraka aminy mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy.
9). Ray ô, atolotro ny ankohonako rehetra amin'ny fikarakarana anao amin'ny anaran'i Jesosy
10). Ray ô, misaotra anao tamin'ny valin'ny vavaka natao tamin'ny anaran'i Jesosy.
Ny vavaka ho an'ny fahendrena
1). Ray ô, misaotra anao noho ny nitahiany ahy fahendrena lehibe
2). Ray ô, avelao ny fahendrenao hitarika ahy amin'ny androko hanao zavatra amin'ny anaran'i Jesosy
3). Ray ô, manorata ahy amin'ny fanahin'ny fahendrena rehefa mihazakazaka ny hazakazaka amin'ny anaran'i Jesosy aho
4). Avelao ho hita eo amin'ny asako isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy ny fahendrena
5). Ray ô, omeo fahendrena aho amin'ny fomba ifandraisako amin'ireo olona isan'andro ao amin'i Jesosy
6). Ray ô, omeo fahendrena aho raha mifandray amin'ny vadiko amin'ny anaran'i Jesosy
7). Ray ô, omeo fahendrena aho amin'ny fifandraisany amin'ireo zanako amin'ny anarana jesosy
8). Manome fahendrena ahy i Dada rehefa mifandraika amin'ny lehibeko ao amin'ny birao amin'ny anaran'i Jesosy
9). Ray ô, omeo fahendrena aho amin'ny fifandraisako amin'ireo mpanafidiko amin'ny anaran'i Jesosy
10). Ray ô, misaotra anao aho noho ny nanorenany ahy tamin'ny fahendrena avy any an-danitra tamin'ny anaran'i Jesosy.
Vavaka ho an'ny fanasitranana
1. Ray ô, Misaotra an'Andriamanitra aho noho ny nametrahany ny fanafahako amin'ny aretina rehetra nataon'i Jesosy.
2. Manafaka ny tenako amin'ny aretina nolovaina tamin'ny anaran'i Jesosy.
3. Tompo ô, alefaso ho fototry ny fiainako ny famaky anao, ary aringano ny aretina rehetra ao anaty vatako amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Avelao hivoaka hiala amin'ny rafiko ny ra nalatsak'i Jesosy isaky ny nametraka ny aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Manafaka ny tenako tsy ho voan'ny aretina aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Avelao ny ran'i Jesosy sy ny afon'ny Fanahy Masina manadio ny taova rehetra ao amin'ny vatako, amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Izaho dia mivadika sy manafaka ny tenako amin'ny fanekena ratsy rehetra avy amin'ny aretina, amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Izaho dia mivadika sy manafaka ny tenako amin'ny ozona ratsy rehetra nolovaina ka nitondra aretina matetika amin'ny vatako, amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Manohitra ny fanahy ratsy rehetra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
10. Ry Tompo, avelao ny herin'ny fitsangananao hitsangana amin'ny fahasalamako amin'ny ankapobeny amin'ny anaran'i Jesosy.
1. Ray ô, misaotra anao aho nampiditra ahy tamin'ity andro vaovao ity amin'ny anaran'i Jesosy
2. Ray ô, misaotra anao aho noho ny fiarovana ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
3. Ray ô, misaotra anao aho noho ny fanampiana ahy hiady amin'ny adinako rehetra anio amin'ny anaran'i Jesosy
4. Ray ô, misaotra anao noho ny hatsaranao sy ny famindram-ponao teo amin'ny fiainako tamin'ny anarana jesosy aho
5. Ray ô, misaotra anao aho noho ny nahafahako nahita izao androany salama tsara amin'ny anaran'i Jesosy izao
6. Ray ô, misaotra anao aho tamin'ny vavaka rehetra novaliana omaly tamin'ny anaran'i Jesosy
7. Ray ô, misaotra anao aho noho ny fiarovan'Andriamanitra izay rehetra hivoahako sy hidirako amin'ny anaran'i Jesosy
8. Ray ô, misaotra anao aho noho ny vatsy avy any an-danitra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Dada ô, misaotra anao aho noho ny nandresanao ny ady rehetra tamin'ny fiainana tamin'ny anaran'i Jesosy
10. Ray ô, misaotra anao aho noho ny fanakorontanana ny herin'ny fahavalo tamin'ny fiainako tamin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraNy vavaka mba hiarovana amin'ny fanjakan'ny haizina
Next lahatsoratraVavaka 100 ho fiarovana amin'ny herin'ny maizina sy ny mpanao ody ratsy
Vavaky ny famonjena amin'ny fipetrahan'ny ota
Salamo 121 Vavaka mba hahazoana fiarovana sy fanampiana avy amin'Andriamanitra
30 Ireo vavaka tokony hivavaka momba ny fanomezana ara-panahy